पूँजी परिचालन हुने क्षेत्र कसरी अनुत्पादक हुन्छ? धितोपत्र वोर्डका निर्देशक अधिकारीको बिचार – Insurance Khabar
पूँजी परिचालन हुने क्षेत्र कसरी अनुत्पादक हुन्छ? धितोपत्र वोर्डका निर्देशक अधिकारीको बिचार
प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७४, बिहीबार १०:१९
लगानीकर्ताहरु राम्रा कम्पनीले एफपिओ निष्काशन गर्दा लाखौ रुपैयाँ पैसा हाल्न तयार हुन्छन्। तर नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीले निष्काशन गर्यो भन्ने पक्कै तयार नहोलान्। त्यही भएर दोस्रो बजारमा सबै कम्पनीको मूल्य समान हुँदैन। जुन कम्पनीले राम्रो गर्छ, राम्रो लाभांस भुक्तानी गर्छ उसको मूल्य माथि हुन्छ। कमजोर कम्पनीको मूल्य तल हुन्छ। त्यसैले शेयर बजारलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन।
प्रत्यक्ष उत्पादन गर्नेलाई मात्र उत्पादनमूलक भनेर परिभाषित गर्नु संकुचित मानसिकता हो। पूँजीलाई परिचालन गरेर त्यही कुरा उत्पादनसँग जोडिने हो। किसानले ५० रुपैयाँमा तरकारी उत्पादन गरिरहेको छ। बजारमा २० रुपैयाँमै पाइयो। अब किसानको ५० रुपैयाँको तरकारीलाई उत्पादनमूलक भन्ने कि अनुत्पादक? उत्पादन गर्ने वित्तिकै उत्पादनमूलक हुँदैन। बजारबाट २० रुपैयाँमा तरकारी किनेर किसानले खर्चिरहेको पूँजी र परिश्रम अन्यत्र लगाउँदा त्यो उत्पादनमूलक हुन्छ। नत्र २० रुपैयाँमा बजारमा पाइरहँदा ५० रुपैयाँ खर्चिएर कसैले तरकारी खेति गर्छ भने त्यो अनुत्पादक हुन्छ।
पूँजी बजार अनुमानका भरमा चल्छ भनिन्छ। अनुमान गर्नु त नराम्रो होइन नि। अनुमानले नै परिदृश्यलाई फराकिलो बनाउँछ। अनुमान नै भएन भने बजारमा तरलता कसरी सृजना हुन्छ? तुरुन्तको तुरुन्तै बेच्नको लागि कोही न कोहो तयार हुनु पर्छ। पूँजी बजारमा त्यो स्पेस सँधै सुरक्षित हुन्छ। त्यही भएर यो बजार चलायमान हुन्छ। बजार चलायनमान भएकै कारण पूँजी परिचालन हुन्छ।